၂၀၂၂ ခုနှစ် အာရှအားကစားပွဲတော် စေတနာ့ဝန်ထမ်းများခေါ်ယူရန် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လူသစ်စုဆောင်းခြင်း စတင် - Xinhua News Agency
ဟန်ကျိုး ၂၀၂၂ ခုနှစ် အာရှအားကစားပွဲတော် ကျင်းပမည့် အဓိကနေရာအား တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ဟန်ကျိုး၊ မေ ၂၂ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ ဟန်ကျိုးမြို့တွင် ကျင်းပမည့် ၁၉ ကြိမ်မြောက် အာရှအားကစားပွဲတော်အတွက် စေတနာ့ဝန်ထမ်းများခေါ်ယူရန် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လူသစ်စုဆောင်းခြင်းကို မေ ၂၂ ရက်၌ ကျင်းပသော အခမ်းအနား၌ စတင်လိုက်ကြောင်း သိရသည်။ ဟန်ကျိုး အာရှအားကစားပွဲတော် ဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီ (HAGOC) အနေဖြင့် ၂၀၂၂ ခုနှစ် အာရှအားကစားပွဲတော်နှင့် အာရှ မသန်စွမ်းအားကစားပွဲတော်၌ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် စေတနာ့ဝန်ထမ်း ၅၂,၀၀၀ ခန့် လိုအပ်မည်ဟု ခန့်မှန်းထားသည်။
စေတနာ့ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် ဖွင့်ပွဲနှင့် ပိတ်ပွဲအခမ်းအနားများနှင့် အားကစားယှဉ်ပြိုင်ပွဲများနှင့် ပွဲတော်နှင့် ဆက်စပ်သော လှုပ်ရှားမှုများအတွင်း ပြိုင်ပွဲဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ၊ ဘာသာစကားဝန်ဆောင်မှု၊ ပွဲကြည့်ပရိသတ်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှု နှင့် အချက်အလက်နည်းပညာ စသည့် နယ်ပယ် ၁၃ ခုတွင် ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့အနက် ၄၅,၀၀၀ ဦးမှာ ဟန်ကျိုးမြို့တွင် ဝန်ဆောင်မှုများ ပံ့ပိုးပေးရမည်ဖြစ်ပြီး အခြား ၇,၀၀၀ ဦးအား အားကစားပွဲ ပူးတွဲကျင်းပမည့်မြို့များဖြစ်သော နင်းပေါ၊ ဝမ်ကျိုး၊ ကျင်းဟွာ၊ ဟူကျိုးနှင့် ရှောက်ရှင်း စသည့်မြို့များ၌ တာဝန်ဖြန့်ကျက်ထားမည်ဖြစ်သည်။
“စေတနာ့ဝန်ထမ်းတွေက မည်သည့် အာရှအားကစားပွဲတော်မဆို အောင်မြင်မှုရဲ့ ကျောရိုးနဲ့ အ‌ရေးပါတဲ့ ပံ့ပိုးမှု အရင်းအမြစ်ဖြစ်ပါတယ်” ဟု အာရှတိုက် အိုလံပစ်ကောင်စီ ဥက္ကဋ္ဌ Sheikh Ahmad Al-Fahad Al-Sabah က ပြောခဲ့သည်။ “အားကစားပွဲတော်ရဲ့ စေတနာ့ဝန်ထမ်းတွေဆီက အပြုံးတွေနဲ့ စံပြဝန်ဆောင်မှုတွေက ဆက်သွယ်ရေး နည်းလမ်းအဖြစ် ကျွန်တော်တို့ အားလုံးကို ချိတ်ဆက်ပေးပြီး ကောင်းမွန်သော အားကစားပွဲအတွေ့အကြုံကို ပံ့ပိုးပေးကာ နက်ရှိုင်းသော ချစ်ကြည်ရေးကို တွန်းအားပေးဖြစ်ပေါ်စေမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်” ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
HAGOC ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှင့် ဟန်ကျိုးမြို့တော်ဝန် Liu Xin က “စေတနာ့ဝန်ထမ်းတွေဟာ လက်ခံကျင်းပမယ့် အိမ်ရှင်မြို့ရဲ့ ကမ္ဘာကြီးကိုတင်ပြမယ့် ရွှေရောင်နာမည်ကတ်ပြားတွေပါပဲ။ စေတနာ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ အပြုံးတွေဟာ ဟန်ကျိုးမြို့ကို ပိုပြီးလှပအောင် လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်” ဟု ပြောခဲ့သည်။
စေတနာ့ဝန်ထမ်းလျှောက်ထားမှုများကို ၂၀၂၁ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၃၁ ရက်အထိ ဖွင့်လှစ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဟန်ကျိုးအားကစားပွဲတော်အား ၂၀၂၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၁၀ ရက်မှ ၂၅ ရက်အထိ ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
HANGZHOU, May 22 (Xinhua) — A global recruitment drive for volunteers for the 19th Asian Games in Hangzhou was launched ataceremony here on Saturday. The Hangzhou Asian Games Organizing Committee (HAGOC) estimate that about 52,000 volunteers will be needed to serve the 2022 Asian Games and Asian Para Games.
The volunteers will be engaged in 13 areas, including competition operations, language service, spectator service and information technology at the opening and closing ceremonies and during sports competitions and Games-related activities. Among them, 45,000 will provide services in Hangzhou, while the other 7,000 will be deployed in the co-host cities of Ningbo, Wenzhou, Jinhua, Huzhou and Shaoxing.
“Volunteers are the backbone andasource of vital support for the success of any Asian Games,” said Olympic Council of Asia president Sheikh Ahmad Al-Fahad Al-Sabah. “I am confident that the many smiles and exemplary services from the Games volunteers will serve asameans of communication, connecting all of us by providingabetter Games experience and fostering deeper friendships.”
Said HAGOC vice president and Mayor of Hangzhou Liu Xin, “Volunteers are golden name cards the host city present to the world. I believe the smiles of the volunteers will make Hangzhou even more beautiful.”
Applications for volunteers will be open until October 31, 2021. The Hangzhou 2022 Games will take place from September 10 to 25, 2022. Enditem
A bird’s view image of the main venue for the Hangzhou 2022 Asian Games taken on April 8, 2020. (Xinhua/Huang Zongzhi)